Poltava Medical & Dental Academy - Fidirana International Center
Okrainiana Medical & Dental Academy
Okrainiana Medical & Dental Academy no iray amin'ireo tsara indrindra
fitsaboana oniversite any Ukraine sy Eoropa ho an'ny vahiny mpianatra.
Okrainiana Medical & Dental Academy tanteraka oniversite ho an'ny fianarana Fitsaboana / MBBS any Ukraine
Tonga soa eto amin'ny Okrainiana Medical & Dental Academy
fianarana fitsaboana / Mbbs
amin'ny ambany ny saram-pianarana
Poltava Okrainiana Medical & Stomatological Academy (Border na ny zanany),no iray amin'ireo lehibe indrindra sy tsara indrindra ara-pitsaboana oniversite URSS teo aloha.
Nanomboka tamin'izay, over 40,000 tena mahay mpitsabo, fantatra tsara ny mpahay siansa, mpikaroka, fahasalamana service mpikarakara avy any Ukraine, Rosia, hafa firenena Eoropeana, Asian, Afrikana sy Amerikana firenena efa nahazo diplaoma tamin'ny UMDA.
Nahoana fianarana fanafody
Ukraine manana be dia be ny tsara tarehy tombontsoa ho an'ny vahiny mpianatra. Voalohany indrindra, Ukraine no manana ny ambany indrindra ny saram-pianarana any Eoropa, fa avo kalitaon'ny fampianarana
UMSA manana dingana tsotra fieken-keloka ho an'ny vahiny mpianatra. Tsy mila mandalo fanadinana, IELTS na TOEFL.
Rector ny hafatr'i
Ny tsara indrindra sehatra matihanina High mpampianatra, ampy fitaovana tsara hevi fianarana sy ny fitoeran-tavin pitsaboana, boky tsy manam-paharoa vola ny mpahay siansa tranomboky, Internet fidirana, mandroso foto-drafitr'asa ny mpianatra izay liana toeram-pianarana ao amin'ny zava-miafina ny fiainana - ora fidirana amin'ny siansa Labs, ny fahafahana hiasa amin'ny fitaovana tsy manam-paharoa, ny fahafahana hianatra fikarohana teknolojia maoderina. Mirehareha izahay ny 80-taona tantara, ny oniversite, ny mpiasa, ny ankehitriny sy ny ho avy nahazo diplaoma!
Vakio ny hafatra
fieken-keloka 2016-2017 misokatra
Polatava dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Ukraine. Tsy toerana akaiky an'i Kyiv (Okrainiana renivohitra). Eto dia ho hitanao mahagaga toetra sy mahafinaritra trano. Miandry anao in Poltava!
teny avy amin'ny mpianatra
Tiako Poltava & tiako UMSA. Faly aho mba ho anjara amin'izao fiaraha-monina mahafinaritra mpianatra ao Poltava Okrainiana Medical & Dental Academy. Eto dia be dia be ireo mpianatra avy any India ny niaviany sy ny hitako be dia be ny namana avy any amin'ny firenen-kafa
Natahotra ny hianatra any ivelany, fa ankehitriny Tena faly aho fa Izaho ao amin'ny UMSA izao. I tia oniversite, tanàna, mpianatra sy ny mpampianatra. Nahazo fahalalana be dia be ary mino aho fa ny hoavy dia ho mamirapiratra. Misaotra ry zanak'i!
MSA vaovao farany
fieken-keloka 2016 – samoina iray sisa
Septambra 2, 2016
Day ny fahalalana